iPow 10000E si Walio Eletrọniki | Gam akporosis
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'oge ndị a nke nnukwu smartphones nwere ihe ịtụnanya dị na mkpebi enweghị atụ, na ọ dị anyị mkpa ịkwụ ụgwọ ọdụ ọhụụ ọhụụ anyị ihe karịrị otu ugboro n'ụbọchị. Karịsịa, ndị ọrụ ahụ niile, gụnyere mụ onwe m, ndị nwere ụbọchị niile na ama ma ọ bụ mbadamba na aka ma na-enye ya nnukwu okpete.
Nke a bụ ebe onye na-emepụta teknụzụ Spanish na-abanye Ụlọ ọrụ Walio Electronics ya batrị dị na mpụga nke ihe ọ bụla na ihe ọ bụla na-erughị 10.000 mAh inwe ike ịkwụ ụgwọ ngwaọrụ mkpanaka anyị n'ebe ọ bụla anyị nọ na mgbe ọ bụla anyị chọrọ ya. Aha gị IPow 10000E ma mgbe ahụ anyị na-akọwa nkọwa nile nke a Banyere Ike Ike Bank ewere otu n'ime ihe pere mpe na nha, nke ahịa Spanish niile.
Iji malite, gwa ha na imecha nke IPow 10000E Ha bụ n'ezie àgwà na-egosi anyị ahụ siri ike ma na-eguzogide ọgwụ n'otu oge ahụ, dịka m kwuru na mbụ, ọ bụ otu n'ime Banlọ Akụ Banyere Obere, na-atụle ikike ibu ya nke 10.000 mAh nke ndị dị ugbu a na ahịa Spanish.
N'etiti njirimara ndị a ga-eme ka ọ pụta ìhè, ọ bara uru ịkọ ya smart ụgwọ selector nke ahụ ga-edozi amperage mmepụta, n'etiti 1 amp na 2 amps, na-akpaghị aka na mgbe niile dabere na mkpa batrị anyị chọrọ ịkwụ ụgwọ. O nwekwara a smart nche usoro iji gbochie ụdị mmebi ọ bụla nwere Bank Power n'onwe ya na Smartphone ma ọ bụ Mbadamba ụrọ anyị na-akwụ ụgwọ.
El IPow 10000E Ego ole ka ọ dị na ọkụ ngosi anọ iji gwa anyị ọkwa ọkwa batrị, nke ọ bụla n'ime LEDs ngosi ahụ ga-adaba na ụgwọ 25% ma ọ bụ ihe dị na 25000 mAh. Ọzọkwa, n'otu akụkụ ya nwere ọkụ dị ike nke na-eme ka anyị bụrụ ọrụ nke ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ mberede. Iji rụọ ọrụ ya, dị nnọọ pịa bọtịnụ Ike ugboro abụọ n'usoro.
Na mmechi, gwa ha na ndia 10.000 mAh si iPow 10000E, ha na-enye anyị ụfọdụ atọ ụgwọ zuru ezu nke ọ bụla ama esịne na elu-ọgwụgwụ gam akporo, Windows ekwentị ma ọ bụ Apple iOS.
N'ikpeazụ gwa ha na obere oge anyị ga-aga -enweta ike iwepu batrị a na mbelata ego 34,99 Euro Kama 39,99 Euro nke bụ ọnụahịa gọọmentị na ọnụahịa m na-ekwu na nyocha vidiyo nke ngwaahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » iPow 10000E nke kachasị 10.000 mAh Walio PowerBank dị n'ahịa
TWRP, na quintessentially gbanwetụrụ Recovery na-emelite ka mbipute 2.8.4
Etu esi melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo Lollipop